Amniga adduunka Omni-Channel
Sida Looga Hortago Xadgudubyada Xogta Adduunkan Omni-Channel
Google ayaa go'aamisay in hal maalin, 90% macaamiisha ay isticmaalaan shaashado badan si ay ula kulmaan baahidooda internetka sida bangiyada, dukaamaysiga, iyo safarka ballansashada waxayna rajaynayaan in xogtooda ay sii ahaandoonto mid amaan ah markay ka soo boodayaan minka ilaa barxadda. Ku qanacsanaanta macaamiisha sida mudnaanta koowaad leh, amniga iyo ilaalinta xogta ayaa ku dhici kara dildilaaca. Sida laga soo xigtay Forrester, 25% shirkadaha ayaa la kulmay xadgudub weyn 12-kii bilood ee la soo dhaafay. Mareykanka kaliya 2013, celceliska qiimaha jebinta xogta wuxuu ahaa $ 5.4 milyan.
Xogta hoose ee hoose, Aqoonsiga Ping wuxuu ina tusayaa sida ay isbadaleen habdhaqanka macaamilka iyo filashadu, saamaynta ay ku yeesheen tikniyoolajiyadaha ganacsiga, iyo doorka muhiimka ah ee ay nabadgalyadu ka ciyaarayso markay tahay bixinta khibrada macaamiisha ugu dambaysa. Raac talooyinkooda si loo hubiyo in xogta macaamiishaadu ay ahaato mid ammaan ah oo ammaan ah.
Tags: e-commercetafaariiqda elektarooniga ahecommerceinfographicomni-kanaalomnichannelaqoonsiga pingtafaariiqdaammaanka
Warbaahintu Way Guuldareysaa Sababtoo ah Iimaan La'aan Nafteeda Ah
Ha ku dhicin Khiyaanada “Jiritaanka Deegaanka”